Ithegi: donald trump | Martech Zone
Ithegi: donald trump
Ileta evulekileyo eya ku @Jack malunga ne-Twitter
NgoLwesihlanu, Februwari 10, 2017 NgeCawa, ngoFebruwari 12, 2017 Douglas Karr
Dear Jack, Kunyaka ngoku, bendiqhula ukuba i-Twitter ifana nentombazana endandiyithanda esikolweni eyayingayi kundinika ixesha losuku. Ngesinye isikhathi sasidlala ukujikeleza ibhotile kwigumbi elingaphantsi, kwaye wakrweca ibhotile ukuze amange umfana owayekufutshane nam owayeyinjubaqa. Wayophula intliziyo yam. Kwaye waqhekeza eyakhe. Saphulukana sobabini. I-Twitter iyalahleka, nayo. Ubhale kwimivuzo yakho
NgoLwesine, uJuni 30, 2016 NgoLwesine, Julayi 28, 2016 Douglas Karr
Unyulo oludlulileyo, ndenze impazamo yokuthumela amanye amanqaku ezopolitiko kule bhlog. Ndabamba indlwane ye-hornet kwaye ndeva malunga nayo emva kweenyanga. Ayisiyo iblogi yezopolitiko, yibhlog yentengiso, ke ndiza kugcina izimvo zam kum. Ungandilandela kuFacebook ukuze ndibone umlilo. Oko kwathethi, ukuthengisa sisiseko salo lonke iphulo. Kweli phulo sibona uDonald Trump eshukumisa isiko
NgeCawa, Meyi 1, 2016 NgeCawa, Meyi 1, 2016 Douglas Karr
Kule veki, bendinencoko emangalisayo nomlingane oselula kwishishini lokuthengisa. Umntu wayekhathazekile. Babengcali kushishino kunye neminyaka yeziphumo ezintle. Nangona kunjalo, babedla ngokungahoywa xa kufikwa kumathuba okuthetha, ukucebisa, okanye ukuthathelwa ingqalelo ziinkokheli. Kwiminyaka engama-40 ubudala, igunya lam lafika mva kakhulu kunenkokheli ezininzi ezaziwayo kwindawo yentengiso. Isizathu silula- bendingu
Ukwamkelwa koSaziwayo kusoloko kubonwa njengendlela efanelekileyo kwiinkampani zokuthengisa iimveliso zazo. Iinkampani ezininzi zikholelwa ekubeni iimveliso zazo ezinxulunyaniswa nosaziwayo ezithandwayo ziya kunceda ukuqhuba ukuthengisa. Abathengi babonakala bengaqinisekanga ngefuthe labo nge-51% besithi ukuxhaswa ngabantu abadumileyo kwenza umahluko omkhulu kwizigqibo zabo zokuthenga. Ngelixa i-ROI kubuchule obuninzi bokuthengisa bunokulinganiswa- i-ROI kwizivumelwano zosaziwayo kunokuba nzima ngakumbi ukuyibala. Zininzi